Dịka ndị ọka iwu na-akwado ego na-arụ ọrụ, ị gaghị abụ naanị onye ahịa, nke a pụtara na ọ bụ mgbe niile ka ị ga-akwụ ụgwọ. O nwere ike ị gaghị enweta 100% anya ma ọ bụrụ na ha nwetara nnukwu ego na-akwụ ụgwọ maka nnukwu onye ahịa ha.
Ya mere, ị ga-achọ ịma usoro iwu na usoro nkwekọrịta iji hụ na azụmahịa gị na-aga n'ihu, jide n'aka na ị nwere kọntaktị na ọfịs onye ọka iwu na ị nwere ike ijide n'aka ịlele ọganihu. Nke a nwere ike ịbụ onye ọka iwu kacha nta ma ọ bụ odeakwụkwọ. Ọ bụrụ na ị maara usoro igodo ndị ị maara ajụjụ ndị ị ga-ajụ mgbe akụkụ nke ọzọ dị na azụ gị.
Ị nwere ike ịmepụta listi nlele nke gị nke na-anọdụ n'ihu faịlụ gị, mgbe ị na-eme nke a, ọ ga-eme ka ọ dịkwuo mfe maka onye ga - enyere gị aka n'ọdịnihu n'ihi na usoro bụ isi dị.
Jụọ ebe a ka ịchọta onye ọka iwu nke nwere ike ịnye ọkwa nke ọrụ ị chọrọ, ma ọ bụghị ya buru ibu na ị dịchaghị mkpa nye ha.
Mee nnyocha na njikọ ndị a;
http://www.lawsociety.org.uk (Chọta onye ọka iwu)
Jiri nlezianya họrọ ndị ndụmọdụ gị - hụ na ị bụghị ala nke ụlọ ahịa